Nabaddoonnada gobolka Bari oo baaq-nabadeed ka soo saaray colaadda Kob-dhexaad – Radio Daljir
Nabaddoonnada gobolka Bari oo baaq-nabadeed ka soo saaray colaadda Kob-dhexaad
Bossaso, July 28 – Nabaddoonnada gobolka Bari ayaa baaq-badeed ka soo saaray xurguf-colaadeedka u dhaxaysa beelo ehelo ah oo wada deggan deegaanno ka mid ah gobolka Bari kuwaasi oo in muddo ah ay u dhaxaysay colaad soo jiitamay.
Nabaddoonnada ayaa baaqoodoon oo goordhaweyd soo baxay ku dallabaday in si deg deg ah loo joojiyo xabadda iyo is-xumaansiga, kaasoo ka dambeeyey kaddib markii maanta barqanimadii 7 qof lagu dilay tuulada Kob-dhaxaad ee gobolka Bari, in ka badan 20 kalena lagu dhaawacay isla dhacdadaasi.
Dadkaasi la-laayey iyo kuwa la dhaawacay ayaa dhammaantood ahaa dad rakaab ah oo saarnaa baabuur ka timid dhinaca degmada Qaldala ee gobolka Bari, kuna sii jeeday magaalada Bossaso, waxaana baaqa nabaddoonnadu uu u qornaa sidaan hoose.
Xafiiska Iskaashiga & Xirrirka Nabaddoonada Gobolka Bari.
Xafiiska Iskaashiga & Xirrirka Nabaddoonada Gobolka Bari ayaa waxay si wada jir ah baaq nabadeeed uga soo saareen dilalka foosha ee lagu gumaadayo dadka aan waxba galabsan ee Gobolka Bari, waxayna iyaga oo aad uga xun tacsi u dirayaan dadkii ku geeeriyooday dhacdadii foosha xumayd ee maanta ka dhacday tuulada Kob-dhexaad ee Gobolka Bari.
Ka dib markii ay arkeen kana fekereen xaaladda khatarta ah ee dhalatay colaadda soo noqnoqtay iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay colaaddaas, iyo walaaca laga qabo cawaaqibka xun ee yeelan karto mustaqbalka dhowba, waxaa xafiiska iskaaashiga & nabaddoonada gobolka Bari ay baaq nabaded ku soo jeediyeen:
1.In si Shuruud la?aan ah oo degdeg ah loo joojiyo xabbadda iyo Colaadaha soo Noqnoqonaya ee u Dhaxeeya Beelaha walaalaha ah ee Wada Dega Gobolka Bari Gaar ahaan Degmooyinka Ufayn iyo Boosaaso ,kuwasoo Dhacdooyinkii u danbeeyey ay ka dhaceen Kob-dhexaad maanta,Halkaasoo Dad aan waxba Galabsan loogu Geystay Dil iyo Dhawac,
2.xafiiska iskaaashiga & nabaddoonada gobolka Bari waxay ka codsanayaan Dawladda Puntland in ay tallaabada uga aaddan ee waajibka ah ay ka qaadato degdeg u joojinta colaadda taagan, iyo hirgelinta xabbad joojin dhaqso lagu gaadho arrintaas.
3.waxay qaylo dhaan u dirayaan kuna boorrinayaan Isimada, nabaddoonnka iyo samo jeclaha Puntland in ay u istaagaan qaboojinta iyo xallinta colaadda taagan,
4.xafiiska iskaaashiga & nabaddoonada gobolka Bari waxay u arkaan sii socoshada colaaddan ka dhex alosan beelaha walaalaha mid halis weyn ku ah amniga, nabadda, wadanoolaanshaha iyo midnimada dadweynaha Puntland oo ku caanbaxay walaalnimo, ehelnimo, wadanoolaansho ku dhisan isxaqdhawr, iskaashi, nabad jacayl iyo midnimo. Colaadda taaganna waamid dhabar jabinaysa dhaqankaa nabadeed ee bulshada Puntland caanka ku ahayd.
5.In la tixgeliyo heshiisyadii nabadeed ee hore ay ugaadheen labada beelood ee colaaddu dhextaal,
xafiiska iskaaashiga & nabaddoonada gobolka Bari
Towfiiqda Ilaah hanawaafajiyo.